मलाई फेरि ... WWII
प्रश्न मलाई फेरि ... WWII
2 वर्ष4महिना पहिले #278 by PAYSON
यो मलाई फेरि छ। म बस स्पाइटलिन थियो 'र यदि एक WWII सेक्शन गर्न को लागी एक प्रयास भएको थियो। सबैभन्दा बढी भागको लागि, कसैले पनि त्यस युगबाट कुनै विमानहरू उडान गर्न खोजेको छैन। यो शायद एक नया अनुभव हुनेछ, हरेक अब र मच2-3बाट फिर्ता गर्न को लागि, र angled डेक मा धेरैo / fasto लैंडिंग को बजाय एक पुराना / महान फ्लैट शीर्ष मा लैंडिंग को भावना को आनंद ले। म अब म एक को लागी सानो क्यारियर बेडाको मजा लिनेछु। (अब Corsair हामीसँग धेरै रमाइलो छ। म एक प्यान योजनाहरु मध्ये एक कोस्ट धातु मोडेल छ।)
2 वर्ष4महिना पहिले #288 by Gh0stRider203
म 1000% यसको पक्षमा छु!
2 वर्ष4महिना पहिले #297 by PAYSON
एक हजार प्रति वर्ष? !!!!!? वाह, यो अर्को चाहिन्छ "हाम्रो बाटो!" - -]
2 वर्ष4महिना पहिले #328 by Gh0stRider203
हाँ, म अधिकतर मेरो VA को लागि jumbos उड्छ .... तर म WWII पक्षीलाई माया गर्छु
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.446 सेकेन्ड